‘हिम्मतवाली’ रेखाको यो कस्तो प्रेम ? « Mazzako Online
‘हिम्मतवाली’ रेखाको यो कस्तो प्रेम ?
देखेका र लेखेका कतियप कुराहरु सत्य नहुन सक्छन् । यद्पी सामाजिक संजालहरुमा खुशी साथ लेखिएका केही प्रसंगहरुले भने कहिलेकाही तहल्का मच्चाएको देखिन्छ । सेलिब्रेटीले फेसबुकमा लेखेका कुराहरु बारे भने वहस, चर्चा र परिचर्चा हुन्छन नै । ‘हिम्मतवाली’ अभिनेत्री रेखा थापाले शनिबार आफ्नो फेसबुक वालमा लेखेको स्टाटस र त्यसपछिको कमेन्ट वार्तालापलाई लिएर फिल्मी बजारमा यतिबेला ठुलै चर्चा परिचर्चा चल्न थालेको छ ।
हेलिकप्टर चार्टर गरेर अभिनेत्री रेखा थापा शनिबार भोजपुर पुगेकी थिइन् । रेखा सँगै गायक राजेश पायल राई र गायिका रजनी रिमाल पनि चार्टर गरिएको हेलिकप्टरमै भोजपुर महोत्सवमा पुगेका थिए । भोजपुरबाटै रेखाले हेलिकप्टर अगाडी उभिएको फोटो फेसबुकमा अपलोड गर्दै ‘मिस यू बाबा’ लेखिन् ।
रेखाले कुन वावालाई मिस गरिन् ? उनैलाई थाहा होला । तर, रेखाको ‘हिम्मतवाली’ फिल्ममा खेल्ने एक मुख्य कलाकार सुदर्शन गौतमले रेखाको स्टाटसमा आफुले उनलाई एकदमै मिस गरिरहेको कमेन्ट ठोकिदिए । सुदर्शनलाई ‘सुदु’को सम्बोधन गर्दै रेखाले पनि कमेन्ट फर्काइन्, ‘म पनि तिमिलाई धेरै मिस गर्दैछु ।’
‘हिम्मतवाली’ हिरो सुदर्शन गौतमसँगको फेसबुक वार्तालाप ‘लभ यु’ हुदै ‘चुम्माचुम्मी’ सम्म पुगेको पढ्न सकिन्छ । के सुदर्शनसँग रेखा साच्चिकै प्रेममा परेकी हुन् त? यतिबेला यो प्रसंगले सबैको ध्यान खिचेको छ ।
हिरोसँगको फेसबुक च्याट प्रसंगलाई लिएर मिडियामा छाएको गसिफपछि भने रेखाले सेफ ल्यान्ड खोज्दै पुन फेसबुकमा लेखेकी छिन्, ‘रेखा फिल्मस् का अरु हिरो फिल्मी हिरो मात्रै हुन् । सुदर्शन गौतम साँच्चिकै हिरो हो । हिम्मतवाला नै हो ।’
फेसबुकमा उनको पछिल्लो स्टाटस भने यस्तो छ ।
वाह, हिम्मतवाला र हिम्मतवालीको यो कस्तो प्रेम ।